Uluhlu oluphakathi lweSamsung luya kuba nenzwa yeminwe kwiscreen | I-Androidsis
Isamsung okwangoku ilungiswa ngokupheleleyo kwiifowuni zayo. Kwezi veki zidlulileyo, inkampani sele isishiyile neefowuni ezintsha apho kunokubonwa khona utshintsho olubonakalayo. Imizekelo elungileyo yoku i-Galaxy A9 2018, kunye neekhamera zayo zangemva ezine, okanye i-Galaxy A7 2018, ethi kwimeko yayo ibe neekhamera ezintathu zangasemva.
Kodwa olu ayizizo zodwa iinguqu ezenziwa yinkampani yaseKorea. Izolo basishiyile ngesinxibelelanisi esitsha esihlaziyiweyo esizakufika kwiifowuni zabo kunyaka olandelayo, phantsi kwegama elinye le-UI. Kwakhona, Utshintsho lusilindele ngenzwa yeminwe e-Samsung.
Kwezi nyanga zidlulileyo sibona ukuba zingaphi iifowuni zokubheja kwisenzisi seminwe eskrinini. Into eza kuyongezwa yi-Samsung. Inkampani yaseKorea iceba Faka kwi-2019 olu hlobo lwenzwa kwiifowuni eziphakathi. Ukongeza, sele isaziwa into yokuba baya kusebenza neQualcomm malunga noku.
Iifowuni zenkampani yaseKorea kweli candelo liphakathi ziya kuba nefayile ye- Isenzwa seprint zeminwe, kwaye sele benze iodolo yakho yokuqala yolu hlobo lwenzwa kwiQualcomm. Ke kungekudala baya kubafaka kwiimodeli ezintsha ezifika kolu luhlu luphakathi, oluhlaziywa ngesantya esikhulu.
Ayilulo kuphela utshintsho oluza kuziswa yiSamsung. Izolo inkampani ibhengeze inotshi yayo, ekulindeleke ukuba zifikelele kwiifowuni zakho kunyaka olandelayo. Ezinye iinotshi ezibeka abo bakhuphisana nabo kwindawo embi. Ke kukho utshintsho olukhulu kwinkampani.
Kucacile ukuba i-2019 iya kuba ngunyaka ophambili kwi-Samsung, efuna ukuphinda iqinisekise ubunkokeli bayo kwintengiso yefowuni ephathekayo. Ngolu phuculo, kunokwenzeka ukuba oku kuyakuba njalo. Ngoku, sinokulinda kuphela ukuba zeziphi iimodeli zoluhlu oluphakathi oluya kufika kunye noluvo lweminwe oludityaniswe kwiscreen.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isamsung iya kubheja kwisenzisi seminwe eskrinini